Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 20aad | Somaliland Post
Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 20aad
Shalay waxaynu Qormadii 20aad ee maqaaladeenan taxanaha ah ku soo sheegnay. In Agaasimaha farsamadu wasiir Boobe uga waramay arimaha la xidhiidha musuq maasuqa baahsan ee ka jira wasaaradda warfaafinta. Isaga oo si gaar ahna ugu sheegay in Tv-gu kow ka yahay meelaha ugu daran ee musuq maasuqa ugu weyni ka jiro. Iyada oo uu weliba si cad ugu tilmaamay wasiirka, in heshiiska satellite-ka Thaicom bil kasta lagu xado lacag ka badan tobanaan kun oo dollar. Iyo in ay jirto shirkad aan cida iska leh iyo fadhigeeda midna la aqoonin oo lug weyn ku leh heshiiskaasi. Waxa kale oo aynu qormadaa ku soo xusnay, in markaas dabadeed wasiir Boobe u yeedhay Agaasimaha maamulka iyo lacagta ee Tv-ga Xasan Maxamuud. Kuna amray in uu Agaasimaha farsamada ku wareejiyo wixii documents ah ee uu ka hayo heshiiska Thaicom iyo shirkada aan la garanayn ee u dhaxaysa Tv-ga iyo shirkada Thaicom. Amarkaas oo uu Xasana aqbalay isaga oo aad uga xun.
Hadaba markaas ka dib maxaa dhacay? Agaasime Xasan Maxamuudse, ma fuliyey amarkii wasiirku siiyey? Arimahaas oo dhan waxa si fiican uga waramay Agaasimaha farsamada Axmed Saleebaan Weyne, isaga oo arintaas ka hadlayana waxa uu yidhi “Agaasimaha maamulka iyo lacagta ee Tv-gu markii uu wasiirku amarkaa siiyey isaga oo aad arkayso in uu aad uga xun yahay arinta la faray ayuu yidhi waa hagaag wasiir waan siinayaa. Aniguna wax yar ka bacdi ayaan xafiiskiisii ugu tegay isaga oo fadhiya, waxaanaan ka codsaday inuu I siiyo documentiyadii iyo macluumaadkii uu hayey, ee wasiirku ku amray inuu igu wareejiyo. Hase ahaatee waxba igumuu wareejinin, oo markiiba cudur daar buu iga hor keenay. Waxaanu igu yidhi maanta computer-kii baa iga cilladaysane, berito igu soo noqo markaas baan ku siin doonaaye. Taasna waan ka aqbalay, waanan ka tegay. Dabadeena subixii labaad ee uu yidhi igu soo noqo ayaan hadana xafiiskiisii ugu tegay, si aan uga soo qaato documentiyadii la faray inuu igu wareejiyo. Balse sidii maalintii hore oo kale ayuu maalintaasna la yimi mar marsiinyo iyo cudur-daar kale. Oo waxa uu yidhi “maanta Internet-kii baa iga xunoo emailkaygii ayaanan furi karayn, documentiyadiina halkaas bay igaga jiraane barito igu soo noqo”!!. Maalintaasna aniga oo faro madhan ayaan ka tegay.
Dabadeedna markii la gaadhay maalintii sadexaad ee uu Xasan qabsaday in uu wax igu wareejin doono. Ayaa waxaa dhacday goor subaxnimadii hore ahayd, oo aanan weli Xasana u tegin. Inuu wasiir Boobe xafiiskiisa iigu yeedhay. Ka bacdina wasiirku markii aan u tegay ee aan xafiiskiisa ugu galayba. Isaga oo aan xitaa I salaamin ayaa waxuu iga horkeenay amar ku saabsan in aan faraha kala baxo heshiiska Thaicom iyo shirkadii kale ee aan la aqooninba. Isaga oo oo uu si cad iigu yidhi “ Waxaan kuu sheegayaa in aad faraha kala baxdid arinta ku saabsan heshiiska satellite-ka Thaicom iyo weliba shirkadii kale ee aad lahayd cida iska leh lama garanayoba. Sidaas darteed maanta laga bilaabo labadaas arimood midna hawsheeda ma geli kartid, Xasana dib uma weydiin kartid”. Yaab iyo amakaag ayaa Illaahay ii keenay, wax aan ku hadlo ayaan garan waayey. Ugu dambayntiina waxaan ugu jawaabay wasiir marka horeba hawshaas anigu faraha iskalamaan geline adiga ayaa ii diray. Iminkana hadaad I tidhi faraha ka qaad waan aqbalay, amarkaasna waan qaatay.
Mana jirin wax sabab ah oo uu wasiirku ii sheegay in uu sidaas u yeelay. Waxaase markiiba halkaas iiga cadaatay wasiirka inuu Xasan iiga dambeeyey. Isla markaana u sheegay lacagtii dulsaarka ahayd, ee bil walba sida musuq maasuqa ah loogu lunsan jirey heshiiska Thaicom. Taasoo aan rumaysanahay inuu Boobe wixii markaas ka dambeeyey saami weyn ka qaadan jirey. Waayo laga bilaabo maalintaas wasiir Boobe muu jeclaysan jirin, manuu ogolaan jirin in cidi soo hadal qaado hawlaha satellite-ka iyo heshiiska shirkada Thaicom.
Waxa kale oo run ahaantii xusid mudan in wasiir Boobe laftiisu inoo cadeeyey sida uu u diidanaa, isla markaana uga soo hor jeeday joojinta iyo wax ka qabashada heshiiska Thaicom. Waayo waxa uu inoo sheegay in marar faro badan loo soo jeediyey, oo weliba culays xoog leh iyo cadaadis faro badan lagu saaray. In uu joojiyo heshiiska Thaicom. Isaga oo weliba si gaar ah oo cadaan ah inoogu sheegay in Madaxweynuhu ku yidhi “Heshiiskaasi waa mid Qaranka dhiig bax ku ah ee inaga jooji”. Waxa kale oo uu Boobe inooga markhaati furay in aanu marnaba garawsanin wax ka qabashada heshiiskaas. Waxaanu inoo sheegay in heshiiskaasi haa mid uu saxeexay wasiir isaga ka horeeyey. Sidaas darteedna uu is weydiin jirey sababta horeba loogu joojin waayey ee isaga loola sugayey joojinta iyo tir tirida heshiiskaas.